Abiy Axmed oo Dadka Itoobiyaanka ugu baaqay inay 'Naftooda u huraan' difaaca Dalkooda (Qeylo-dhaan) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ra’iisulwasaaraha Itoobya Abiy Ahmed ayaa maanta ah shaaciyey in dadka Itoobiyaanka ay sameynayaan “naf-huris” lagu badbaadinayo dalkaaasi.
“Waa in la sameeyaa naf-hurid, taasi oo badbaadin doonta Ethiopia.. Waxa aan wajahnay imtixaanno iyo caqabado kuwaasi oo innaga dhigay kuwo sii xoogeystay. Waxa aan leennahay xulufo ka badan, kuwa ay haystaan dadka naga soo horjeestay,” ayuu yiri Abiy Ahmed oo farriin soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Wuxuu sheegay hadalkan ayaa yimid maalin ka dib markii sagaal kooxood oo fallaago ah ay sheegeen in ay isbahaysi la sameysanayaan Jabhadda Xoreynta Shacabka Tigray (TPLF) oo muddo sannad ah dagaal kula jirtay xukuumadda Abiy.
Dhinaca kale Ra’iisal wasaaraha Itoobiya wuxuu ku eedeeyay saaxiibo badan oo ay Itoobiya lahady ay dhabarka u jeediyeen, balse Itoobiya ay soo martay dagaallo iyo dhibaatooyin adag, ayna kasoo gudubtay.
Wakiilka TPLF Berhane Gebre-Christos ayaa Jimcihii mar uu magaalada Washington ku saxiixayay heshiiska sagaalka xisbi ee isbahaysigan ku midoobay waxa uu sheegay in isbahaysiga ujeedkiisu yahay “in meesha laga saaro taliska Itoobiya ee Abiy Ahmed.”
Todobaadkii hore ayay kooxda TPLF sheegtay in ay qabsatay laba magaalo oo istiraatiji ah oo ku yaala gobolka Amhara, halkaas oo ciidankeedu ay weerareen ka dib markii ay bishii June dib ula wareegeen gacan ku heynta gobolkooda Tigray.
Arbacadiina, waxa ay sheegtay in ciidankeedu gaaray magaalada Kemissie ee gobolka Amhara, waxayna magaaladu 325 kiiloomitir dhanka waqooyi-bari ka xigtaa caasimadda.
TPLF ayaa intaas ku dartay in ay “howlgal wada jir ah” ay kula jirto Ciidanka Xoreynta Oromada, oo ah jabhad kale oo saadaalisay in Addis Ababa ay la wareegi karto toddobaadyo gudahood.
Dowladda, oo Talaadadii ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo ay ku soo rogtay dalka oo dhan ah, ayaa beenisay in fallaagadu ay ku sii siqayaan ama halis ku hayaan caasimadda.
Previous articleMareykanka oo Abaalmarin Lacageed oo cusub Dul dhigay Madaxda Alshabaab (Amiirka waxaa dul saaran..)
Next article“Doorashada dalka ka socota waxay qaadan doontaa 2 sano” Yuusuf Garaad oo xisaab kusoo saaray